Myanmar Love Story: 2010 Happy New Year
Model Photos Collection Box
Don't Allow Under (18) Age Young People
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ။ ဖိုရမ်ထဲမှာ သာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြတော့မှာမို့ နောက်ပိုင်း သတင်းများကို သာ တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားမှု့များသာ တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး ဖိုရမ်ထဲမှာတော့ အားလုံးအား ဆက်လက်တင်ပေးနေမှာ ဖြစ်လို့ http://myanmarlovestory.freeforums.org/ ဖိုရမ် ထဲကို သာ လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
2010 နှစ်ကူးအထူး အစီအစဉ်အဖြစ် သတိတားမိစေရန် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံတိုင်းတွင် လူမျိူးမရွေးဘာသာမရွေး၊ အနှံ့ အပြားအကြီးအကျယ် ကျင်းပကြသော နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ၊ နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များရော၊ ခရစ်ယာန်ဘာ သာဝင်မဟုတ်သူများပါ အထူးသဖြင့် လူငယ်များ ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပဆင်နွှဲကြသော ခရစ်စမတ် ပွဲတော်ကားနီးကပ်လာချေပြီ....
ထိုထိုနေ့ များတွင် လူငယ်များပီပီ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် မိမိတို့ ဆန္ဒရှိ သလို ပျော်ရွှင် ဆင်နွဲကြရာမှ ၊ အပျော်လွန်ကာ ဘ၀ပျက်ခဲ့ ရသော မိန်းကလေးများ၏ အဖြစ်အပျက်များကား ရေးပြလို့ ပင် မကုန်နိုင်အောင် များပြားလှချေ၏....
ဒူဘိုင်းတွင်ပင် ကျော်မကောင်း၊ကြားမကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ ရသော ....
ငယ်ရွယ်သူအရောင်းစာရေးမြန်မာမလေးတစ်ဦး သူ၏ မိတ်ဆွေ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိူးသားတစ်ဦးဖြစ်သူ တိုင်းရင်းသားကောင်လေးတစ်ဦးနှင့်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို ဒူဘိုင်း၏ နာမည်ကျော် Beach တွင် နှစ်ကိုယ်တည်း ကျင်းပခဲ့ ရာ အရက်၊ ဘီယာသောက်စားပြီး၊ အရှိန်လွန်ကာ အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင်ပင် အသိတရားမရှိတော့ ပဲ အချစ်စခန်းဖွင့် ကာ အချစ်နယ်ကျွံမိခဲ့ ကြသဖြင့်ရဲဖမ်းခံရကာ ထောင်၊ အချူပ်ကျပြီး အရှက်တကွဲ၊ ကိုယ်ကျိူး
နည်းခဲ့ ရသည်က ပူပူနွေးနွေးအဖြစ်အပျက်ပင်....
ယုတ်ညံ့ သည့် သုံးတောင်ဝတ်ကျားတစ်ချိူ့ ကလည်း မွေးနေ့ အကြောင်းပြ၊ ဟိုအကြောင်း ပြ၊ ဒီအကြောင်းပြနှင့် ပါတီပွဲ၊ နှုတ်ဆက်ပွဲ၊ ဧည့် ခံပွဲ အမျိူးမျိူးလုပ်ကာ အလိုရှိသောအမျိူး သမီးများအား အရက်၊ ဘီယာ မူးအောင်တိုက်ပြီး ကြံစည်တတ်ကြပေသေးရာ ....
မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်သော ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် သတိပြုရှောင်ရှားသင့် လှပေသည်...
သူတို့ လို လူမသိ၊ သူမသိနှင့်မိမိချစ်ကြိုက်၊ လက်ထပ်ရန်မရည်ရွယ်ပါပဲလျက် အစမှာတော့အပျော်သဘောနှင့် သောက်ခဲ့ ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ အပျော်လွန်ကာ အမူးလွန်ပြီး တစ်စိမ်းတစ်ရံစာ ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်၏ ကုတင်ထက်ဝယ် ဘ၀ပျက်ခဲ့ ကာ ဖြစ်မိမှတော့ မထူးတော့ ပါဘူးဟူ၍ မထူးဇတ်ဆက်ခင်းနေကြသူ မိန်းကလေးများကား ရေတွက်လို့ ပင် ကုန်ခန်းနိုင်ဖွယ်မရှိပေ....
မိမိ၏ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကို အမှန်တစ်ကယ်ပင် ပျက်ပြားယုတ်လျော့ စေသောအရက်၊ဘီယာ ကား မြန်မာအမျိူးသမီးများအတွက် တစ်စိမ်းယောကျာင်္းလေးများနှင့် အတူ မည်သည့် အခါမျှ ၊ မည်သို့ သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် မသောက်စားသင့် ကြောင်း အထက်ပါ နမူနာအဖြစ်အပျက်နှင့် အောက်ပါ ဓါတ်ပုံများက သက်သေခံနေပေတော့ သည်....
သူတို့ ဆီမှာ ဘီယာ၊အရက်နှင့် ဖက်ပြီးကြီးပြင်းလာသည်ဟု ပြောလို့ရသည့် မိန်းကလေးများပင် ဓါတ်ပုံထဲတွင် မြင်တွေ့ ရသည့် အတိုင်းဖြစ်ကြရလျှင် အတွေ့ အကြုံနုနယ်သည့်အူရိုင်း အာရှသူမိန်းကလေးများ ဆိုလျှင်တော့ ပြောဖွယ်မလိုတော့ ပြီ...
ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန်အလို့ ငှာတင်ပြသည်မို့ တစ်ချိူ့ ပုံများ အနည်းငယ်အမြင်မတော် သည်များကို တော့ ခွင့် လွှတ်စေလိုပါသည်.... တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ပါစေသတည်း...
ပထတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါး....နောက်တော့တော်တော်များများ....
လောကကြီးကိုမေ့ အောင်သောက်တော့.....
ကျားသနားမှနွားချမ်းသာရမယ့် ဘ၀ကိုရောက်တာပေါ့ 
စိတ်ကူးထဲတော့ ပျော်မြူးစရာပေါ့ ....
လက်တွေ့ မှာတော့ ....
အင်း.....လူတင်မက....ခွေးတောင် အဆစ်ပါလေဦးမလား !!!....
ကိုယ်မသိတဲ့ တစ်စိမ်းယောကျာင်္းလေးအခန်းမှာများအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ ယင်....
မဖြစ်ဖူးတော့ မပြောနဲ့ နော်....
ဒီဓါတ်ပုံကိုသာကြည့် ပေတော့ .....
တွတ်ကောဒဲ့ ရော ၀င်လေပြီ....
သူ့ အတွက်တော့ ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်မှာ အိပ်နေရသလိုပါပဲ....
ဘုန်းမယ့် သက်လျာ....အုံးစက်ခဲ့ တာ....
တော်ပါပြီ...နောက်တစ်ခါတော့ ....ကြောက်ပါပေါ့ ....
ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်လိမ့် မယ်....
တို့ ကတော့ တို့ ကတော့ .....
ကြွေဘုံပေါ်မှာ အန်ရ....မဟန်လှတဲ့ ဘ၀...
အရက်ဆိုသည်မှာ....ခံစားမှုများနဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ အရာ....
နောက်ဆုံးတော့ဘ၀အတွေ့ အကြုံစုံလှ၊ ရင့် ကျက်လှပါပြီဆိုတဲ့ ဘွားဘွားလည်း ဘီယာအရက်နဲ့ တွေ့ တော့ကွဲပြီး၊ ကဲတာပါပဲ....
ညီမလေးတို့ လောက်တော့ စာမဖွဲ့ လောက်ပါဘူးနော်...
Credits@ ကိုပီတာ ဘလော့ခ်
သိချင်တာ ဒီမှာ ရှာမယ်။ (Search)
Myanmar Love Story's Gallery
Followers (Members) ဒီမှာ စာရင်းလာသွင်းနော်
Myanamar Sexy Girl
Myanmar Girl on Chaung Thar Beach
Another Side of Love (1)
April Kyaw Kyaw (1)
Aye Myat Thu (3)
Aye Wuit Ye Thaung (2)
Banboo Love (1)
Busan(Pusan) Beach (3)
Chit Thu Wai (2)
Eaindar Kyaw Zin (3)
Ei Thandar Khine (1)
Ei Toe (1)
First Time(Korea) (1)
Guide to 21 Century Sex (1)
Half Naked (2)
Hard Myanmar Sex (1)
Home Made Sex (1)
Htet Htet Moe Oo (1)
Htet Moe Myint (1)
K Khine (1)
Khine Thin Kyi (2)
Koon Sink Nay Chi (1)
Le Su (1)
Long Hair Man (1)
Maw Phu Maung (2)
May Lay (1)
May Su Maung (1)
Miss Red Ribbon Beauty Contest (1)
Moe Hay Ko (6)
Myanmar Webcam (2)
Myanmar Girl on Chaung Thar Beach (1)
Myanmar Girl Pussy (1)
Myanmar Girls (12)
Myanmar in Guest House (1)
Myanmar Model and Actress Photos (85)
Myanmar Model Show (1)
Myanmar Music Concert in South San Francisco (1)
Myanmar National League 2009(Yadanar Pone FC) (1)
Myanmar Sexy Girl (10)
Nadi Htut Swe (2)
Nan Su Yadi Soe (2)
Nan Su Yati Soe (1)
Nay Chi Lin Let' (1)
Nobal Kyaw Kyaw (1)
Pale Win (1)
Phwe Phwe (2)
Public Area Sex (1)
Pwint Nadi Maung (2)
Pyae Phyu Khaing (1)
Rebecca Win (1)
Sai Sai Khan Hlaing (1)
Sandi Myint Lwin (4)
Sex Films (10)
Sex Movies (51)
Sexy Photos (17)
Su Htoo Eaindra (1)
Su Myat (1)
Su Wa Ti (2)
TakeaBath3(1)
Tha Zin (2)
Thingyan (2009) (1)
Thingyan (2010) (2)
Thinzar Wint Kyaw (2)
Tin Moe Lwin (1)
Tint Tint Tun (3)
Tun Eaindar Bo (1)
Visit To Love House (1)
WebCam Photos (1)
Webcam Video Download (1)
Weekly Eleven (1)
Wine Su Khine Thein (3)
Wuit Hmone Shwe Ye (3)
Wyne Su Khine Thein (1)
Zaw WAn (1)
ဖိုမ ဆက်ဆံရေး (1)
ပြိုင်ကား အလှဆင်ပြပွဲမှ မြန်မာမိုဒယ်များ (1)
မြန်မာ အလှဖန်တီးရှင်များ ရဲ့ ဖက်ရှင် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ (1)
မြန်မာ့ မော်ဒယ် အိုးများ (1)
မြန်မာ-ထိုင်း အပိုင်း(၃) (1)
သတိ ကုန်ကြမ်းပြတ်နေသည်။ (1)
ပြောင်းလဲနေတဲ့ ရေစီးကြောင်းပေါ်မှ မော်ဒယ်ပွဲများ (1)
Browser & Myanmar Font
Myanmar Love Story အား
Mozilla FireFox ကို သုံးပါ။
အသုံးပြုထားတဲ့ မြန်မာစာ က
If can't see Myanmar Font,
please intstall this
COPYRIGHT © 2009 MYANMAR LOVE STORY GROUP